JAARMIYAALEEN OROMOO TOKKOOMAN. Baga gammaddan Oromoo. Ammallee warra biyya keessa jiranis… – Beekan Guluma Erena
JAARMIYAALEEN OROMOO TOKKOOMAN. Baga gammaddan Oromoo. Ammallee warra biyya keessa jiranis…	Beekan Guluma Erena
Audio/Video/Image Category May 2, 2016
Jaarmiyaaleen Oromoo tokkoomuun kan daran nama jajjabeessudha. Ammas warreen biyya jiranis walitti dhufuufuun gumaa saba keenyaaf hojjechuudhaaf yeroo kamuu caalaa sabni walta’ee adeemuun barbaachisaadhaa….Ittuma fufa…!!
← Dr. Admaasuu Barsiisaa Yunivarsiitii Finfinneefi Guutummaa Biyyaatiif dhaamsa jedhame…Dhugaasaa Dubbate..mee dhaggeeffadhaamee…Bara kan Lukeeleen Wayyaanee marti salphina uffatteem…Dhaggeeffadhaamee..Gabaa Amerikaa daldalachuu dadhabaniim!!
JAARMIYAALEEN OROMOO TOKKOOMAN.Hojii boonsaatu hojjetamaa jira; ammallee kan hafe kan biyya jiru faanas walta’uun gumaa saba Oromoo baasuudhaa →